खोटाङमा जन्मेर चार वर्षको उमेरमा सपरिवार इटहरी झरेका प्रकाशचन्द्र परियार पेशाले पत्रकार थिए । अझै पनि उनी मिडिया कन्सल्टेन्टको रुपमा काम गरिरहेका छन्, तर हिजोआज उनी पत्रकारभन्दा पनि नेताको रुपमा चिनिन थालेका छन् ।
कुनै समय इटहरीका चोक र गल्लीमा नेताहरुको बोली टिप्दै समाचार रोप्ने उनी हिजोआज इटहरीवासीको मनमा इमान्दार राजनीतिको सपना रोप्न व्यस्त छन् । उनले मञ्चमा उभिएर भाषण गरे, ‘अब इटहरीलाई इमान्दार नेतृत्व चाहिएको छ, त्यो नेतृत्वको लागि हामी तयार छौं ।’
यसरी मञ्चमा उभिएर भाषण गर्नको लागि पृष्ठपोषक रह्यो, उनी आबद्ध साझा पार्टी नेपाल । साझा पार्टीको चार खम्बा नै छन्, पद्धती, पारदर्शीता, इमान्दारि, उत्कृष्ठता । चार खम्बामा टेकेर उभिएको उनको पार्टी र उनी आजभोलि बिहानैदेखि आफूलाई गाउँ टोलदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेका छन् ।
‘तर अब पनि ढिलो गरियो भने र नेपालको समृद्धिको मार्ग छाडियो भने यस्तै रहीरहन्छ भनेर म काँग्रेस छाडेर साझा पार्टीमा आबद्ध भएँ ।’ उनले साझा पार्टीका संस्थापकहरुको पहिलो बैठकमा उद्घोष गरे, ‘यो राष्ट्रिय समृद्धिको महायज्ञ हो ।’
उनी साझा पार्टीमा आबद्ध भएको धेरै भएको छैन । साझा पार्टी बनाउनको लागि अहिलेका केन्द्रिय संयोजक रविन्द्र मिश्रले बीबीसीमै छँदा नै छलफल चलाइसकेका थिए । ‘मेरो विषयमा वहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो,’ उनले भने, ‘पछि प्रस्ताव आयो, मैले पनि धेरै सोचेर निकै पछि निर्णय दिएँ ।’
परियारको लागि साझा पार्टीमा जानु सजिलो थिएन । एउटा आम मानिस वा आम पत्रकार भएको भए खासै गाह्रो हुँदैनथ्यो होला । तर उनी त नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाको अत्यन्त निकट थिए । उनको ट्वीटर ह्याण्डल नै सञ्चालन गर्थे परियार । यस्तै नेपाली काँग्रेसको पार्टी निकट अनलाइनको प्रधान सम्पादक थिए उनी ।
‘देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी, त्यसमाथि पनि आफ्नो निकटका नेता देउवा वेटिङ प्राइम मिनिस्टर,’ तर साझा पार्टीको अवधारणाबारे मन्थन गरेपछि उनलाई वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भन्ने बोध भयो । परियार भन्छन्, ‘तर अब पनि ढिलो गरियो भने र नेपालको समृद्धिको मार्ग छाडियो भने यस्तै रहीरहन्छ भनेर म काँग्रेस छाडेर साझा पार्टीमा आबद्ध भएँ ।’ उनले साझा पार्टीका संस्थापकहरुको पहिलो बैठकमा उद्घोष गरे, ‘यो राष्ट्रिय समृद्धिको महायज्ञ हो ।’
दुई चार महिनापछि नै प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका आफ्ना नजिकका नेताको साथ छाडेर उनी नयाँ राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भइरहँदा उनलाई गलत गर्यो भन्ने मान्छेहरुको कमी थिएन । उनी २०७२ सालमा नेपाली काँग्रेसको सुनसरी क्षेत्र नं. २ को महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि थिए । नेपाली काँग्रेसमै रहेर उनले राजनीति गर्न सक्थे । तर उनले पार्टी परिवर्तन गरे ।
‘पछुताउँछ भन्नेहरु निकै थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर केहीले पढेलेखेको मान्छे, स्वविवेकले गयो भन्नेहरु पनि थिए ।’ तर उनी व्यक्तिगत रुपमा दुःख पाएपनि राष्ट्रिय समृद्धिको ईँटा थप्न सकेमा सन्तोष मान्ने बताउँछन् । त्यसै पनि उनलाई राजनीतिमा लागिसकेपछि आफ्नो आम्दानी घट्ने चिन्ता छैन । ‘श्रीमतीको जागिरले पनि सहयोग गरेको छ, त्यसमाथि संयुक्त लगानीको सञ्चार उद्यमले पनि सहयोग गर्छ,’ फजुल खर्चहरु नगर्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाउनु हुँदैन ।’
‘हामी ढिलै आएपनि राजनीतिक दलको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकिइसकेको छ ।’ आफुहरु कसैलाई हराउन वा जिताउन आएको नभइ जनताको मन र मत जितेर इटहरीको विकास गर्न आएको बताउँछन् ।
पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका र अमेरिका तथा अष्ट्रेलियाबाट पत्रकारिता र नेतृत्व विषय पढेर आएका परियार कान्तिपुर टिभीका ब्युरो प्रमुखको जिम्मेवारी निभाइसकेका समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय सदस्य समेत भए भने उनले भारतको प्रसिद्ध अम्बेडकर पुरस्कार समेत पाएका छन् ।
उनको अहिलेसम्मको यही पेशा र पेशाप्रतिको इमान्दारिताले निष्ठाको राजनीति गर्न सक्ने खुबी बनाइदिएको छ । त्यसैले पनि उनको उम्मेदवारीलाई इटहरीवासीले पनि निकै चासो दिएर हेरेका छन् ।
परियारलाई नेपालको राजनीतिले निकै चिन्तित बनाएको छ । वर्षौंपछि पनि पहिलेका नेताबाट देश बन्नेमा ढुक्क हुने ठाउँ उनले देखेनन् । राम्रो बाटो देखाउन राजनीतिक दलको परम्परागत ढर्रा र खराब राजनीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । स्थानिय तहमा इमान्दार मान्छे आएमा विकास र समृद्धि छिटो हुने उनको अनुभव छ । ‘त्यसैले मैले इटहरीको उपमेयर र डा. तारा काफ्लेले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामी ढिलै आएपनि राजनीतिक दलको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकिइसकेको छ ।’ आफुहरु कसैलाई हराउन वा जिताउन आएको नभइ जनताको मन र मत जितेर इटहरीको विकास गर्न आएको बताउँछन् । अनि भन्छन्, ‘समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पालामा ।’
‘चुनाव प्रचारको क्रममा हामीले स्वतःस्फूर्त आएका स्वयंसेवक परिचालन गरेका छौं, कुपन बाँडेर खाना खुवाउने हैसियत पनि हाम्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर इटहरीवासीहरुको विवेक र चेतनास्तर निकै बढेको छ, खर्च गर्नेभन्दा पनि इटहरी बनाउने विचार र व्यक्तिलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’
साझा पार्टीको चुनाव प्रचारशैली पनि अन्य पार्टीको भन्दा फरक देखिन्छ । विभिन्न पार्टीहरुले आमसभाहरु गरिरहँदा साझा पार्टी सञ्चार माध्यम तथा फेसबुकमा बढी सक्रिय छ । त्यसबाहेक बिहान बेलुका विभिन्न ठाउँको घरदैलोमा समेत हिड्ने गरेको र त्यसबाट इटहरीवासीको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको परियार बताउँछन् । ‘चुनाव प्रचारको क्रममा हामीले स्वतःस्फूर्त आएका स्वयंसेवक परिचालन गरेका छौं, कुपन बाँडेर खाना खुवाउने हैसियत पनि हाम्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर इटहरीवासीहरुको विवेक र चेतनास्तर निकै बढेको छ, खर्च गर्नेभन्दा पनि इटहरी बनाउने विचार र व्यक्तिलाई जिताउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’
साझा पार्टीको केन्द्रिय संयोजन समितिका सदस्यसमेत रहेका परियार जितेपछि आफूले गर्नुपर्ने कामको जानकारी र अनुभव दुवै भएको बताउँछन् । ‘उपमेयर भइसकेपछि न्यायिक समितिको संयोजकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समय न्याय, समावेशीकरण, मानवअधिकारको क्षेत्रमा पत्रकारिता र पत्रिकारिताबाहिरबाट पनि काम गरिसकेकोले यो काम मेरो लागि नयाँ होइन,’ उनी थप्छन्, ‘कानुन र मानवाधिकारको लागि छुट्टै मानिस राखेर राज्यकोषको रकम सक्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ उनी जितेर गएपछि पहिलो कामको रुपमा सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार मर्यादा महाशाखा स्थापना गर्ने योजनामा छन् ।
सुनसरीको चतराका योग तथा आयुर्वेदका ज्ञाता सिद्धबाबा कृष्णदासजी महाराज पोखरामा समाधिमा बसेको कार्यलाई पत्याउनेले आध्यात्मिक शक्तिको उपमा दिए त नपत्याउनेले जमिनमुनि कुनै अर्को सुरूङ भएको, रातको समयमा समाधिबाट निस्केर खाना खाने गरेको जस्ता आरोप लगाए।
हुन पनि हो, सर्सर्ती हेर्दा बिना अक्सिजन मिनेट नै गाह्रो हुने मानिसलाई नौ दिन निकै ठूलो समय हो। सहजै विश्वास गर्न झट्ट गाह्रो हुन्छ। तर आम मानिस र विज्ञानको लागि यो अनौठो भए पनि योग साधना गर्नेहरुले यसलाई त्यति नौलो विषय मान्दैनन्।
जानकारहरुका अनुसार समाधि भनेको ध्यानभन्दा पनि गहिरो अवस्था हो। समाधिमा बसेका बेलामा मानिस मृतजस्तै हुन्छ। शरीर कुहिसक्छ, तर मानिस भने लामो समय बेहोसीमा जान्छ। अध्यात्मका ज्ञाताहरु यसलाई भगवान वा दिव्यताको खोजी तथा प्राप्तिका रुपमा व्याख्या गर्छन्।
ध्यानमा बस्दै जाँदा स्वासको गति निकै छोटो हुन्छ। दिमाग शून्य हुन्छ र अन्तमा स्वास अनावश्यक झैं हुन्छ । भनिन्छ, ‘प्राणवायुको ६ सेकेण्ड रोकेर राख्नु ‘धारणा’ हो, ६० सेकेण्डसम्म मनलाई कुनै विषयमा केन्द्रित गर्नु ‘ध्यान’ हो भने १२ दिनसम्म प्राणलाई निरन्तर संयम गर्नु ‘समाधि’ हो।’ समाधिमा रहेको बेलामा सास नफेर्ने मात्र होइन, स्वाद, स्पर्शलगायतका पाँचै इन्द्रियले काम गर्दैनन्।
बाकसभित्र राखेर जमिनमुनि गाडिएको उनको शरीरलाई सुरक्षा दिन तीन वटा ताला खोलेर भित्र पस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रचण्ड गर्मीको यो समयमा उनी नौ दिनसम्म जमिनमुनि रहे। तर नाडी छामेरै रोग पत्ता लगाउने, संसारका सबैजसो जडिबुटी र त्यसको उपयोगबारे जान्ने अनि योग र साधनामा विशेष दख्खल हासिल गरेका उनको लागि यो अभ्यास नयाँ भने होइन। उनले अहिलेसम्म समाधिमा रहँदा तीन पटकसम्म आफूलाई मृत घोषित गरिएको बताए।
‘दुई तीन दिनसम्म पनि ढोका नखोलेपछि हेर्दा म मृतजस्तै रहेछु, उनीहरुले डाक्टर बोलाए, डाक्टरले मृत घोषणा गरिदिएपछि जलप्रवाह गरेर अन्त्येष्टि र्ने भन्ने निर्णय भएछ र अर्थीमा राखेर मलाइ डुंगामा अलि परसम्म लगेर जमुनामा झारिदिए।’ उनले भने, ‘उनीहरुले जलाएको भए आज म यहाँ हुँदिनथेँ।’
नदीले दुई दिनसम्म बगाएपछि केही मानिसले भेटेर जिउँदो जस्तो लागेर उपचार थालेपछि स्वास चल्न थालेको उनले बताए।
‘६ दिन जति भएको रहेछ समाधिमा गएको, त्यसमध्ये दुई दिन त नदिमा बगेंछु,’ उनले भने। कृष्णदासजीका अनुसार उनलाई मरेको भनेर बगाउने र भेट्नेहरु अझै पनि भारतमा जीवित छन्। भन्छन्, ‘अहिले पनि डाँकपत्थरमा उनलाई देख्दा भूत आयो भनेर भाग्ने मानिस धेरै छन्।’ उनले भारतमै एक जना व्यक्ति समाधिमा जाँदा मरेको भनेर जलाइएको घटना समेत सुनाए ।
चतरामा पनि केही वर्षअघि भू-समाधिमा बसेका कृष्णदासलाई समाधिबाट निकाल्दा पनि नाडी र स्वास नचलेको अवस्थामा पाइएको बताउँदै तात्कालीन आयोजक समितिका अध्यक्ष रहेका गणेश सुब्बा ‘विरही’ ले भने, ‘समाधिमा म प्रत्यक्ष बसिरहेको छु, आफैंले पुरेर आफैंले ताला लगाएर राखेको हुँ ।’
‘बाहिरबाट हेर्नको लागि पारदर्शी सीसा राखिएको थियो,’ चतरामा समाधि कोठाको चाबी आफैले राखेको बताउँदै उनले भने, ‘जमरा उम्रेको सबैले हेरेका छन्, निकाल्ने स्वयं त्यतिखेरका सिडिओ, एलडिओहरु हुन् ।’
समितिका पदाधिकारीले पुर्ने र निकाल्ने क्रममा आफूहरु रहेपनि कसैले नपत्याएको बताएका छन्। एक जना पदाधिकारीले भने, ‘कृष्णदासजीलाई भू-समाधिबाट निकाल्दा सेतो हुनुभएको थियो, बालसन्त महाराज जी त रुनु नै भयो ।’
पथिक फाउण्डेशनका स्वामी सतनाम समाधिमा सास नफेरी बस्न सम्भव भएको बताउँछन्। ‘केही विज्ञानहरु छन्, हठ योगी साधकहरुले स्वासको अभ्यास गर्दै गएर सम्भव छ,’ उनी अग्नी तपस्या, भू-तपस्या, जल समाधि आदिलाई सम्भव भएको बताउँदै भन्छन्, ‘तर यी कामहरु गरेर त्यसको अर्थ के त? ओशो, आचार्यश्रीको विचारमा यी चमत्कारिक गतिविधि भए तर यसको उपलब्धि हुनुपर्यो भन्ने हो।’
भारतको जालान्धर जिल्लाको नुरमहल इलाकास्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थानका संस्थापक आशुतोष महाराज समाधिका लागि भनेर ध्यानमा बसेको दुई वर्ष भइसक्यो। तीन महिनाअघि उनलाई मृत घोषित गरिसकिएको छ। तर पनि उनको शरीरलाई जलाउन दिइएको छैन। बरु फ्रिजमा राखेर सड्नबाट बचाइएको छ।
महाराजको साथ रहेका भनिएका डाक्टर हरपालले आशुतोष महाराज क्लिनिकल्ली डेथ अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनको छालाको रंग बद्लिरहेको छ। महाराजको इसीजी, मस्तिष्क र मुटुको धड्कन शून्य छ।
भू-समाधिमा रहनुअघि जमिनमुनिको अवस्थिति राम्रोसँग परिक्षण गर्न नदिइएको आरोप भू-समाधिका आयोजकहरुलाई लाग्नेगर्छ। त्यसैले, भू-समाधिको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउनेवित्तिकै आलोचनात्मक प्रतिक्रिया स्वभाविक पनि हो । आफूले खनेको खाडलमा नौ घण्टा बसेर देखाउन केही चिकित्सकले त चुनौती नै दिए। यस्ता चुनौतीलाई कृष्णदासजी महाराजले एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै सरकारकै निगरानीमा आफू आठ फिट गहिरो खाडलमा तामाको घैलाभित्र पुरिएर समाधिमा बस्न तयार रहेको बताएका छन्।
जे होस्, मानिसमा रहेको शंकालाई विज्ञानसम्मत तरिकाले सम्बोधन नगरेसम्म भू-समाधिलाई आम जनमानसले नाटक मानिरहनेछन् भने वैज्ञानिक विधिबाट परीक्षण गरी प्रमाणित गरेको खण्डमा यो संसारकै लागि अद्भूत घटना हुनेछ।
विस्तृत लेखका लागि क्लिक गर्नुहोस् : http://setopati.com/samaj/46042/
हिमालय टेलिभिजनमा कृष्णदासजीको अन्तर्वार्ता, हेर्नुहोस् भिडियो :
एनसेलको किनबेच प्रकरणसँगै एनसेल बिक्रिको क्रममा भएको नाफामा कर नतिरेको भन्ने प्रसंग चलिरहँदा हामीले बुझ्नै पर्ने केही सामान्य कुराहरु छन् ।
वास्तवमा नाफा एनसेलले गरेको होइन, त्यसैले कर तिर्न नीतिगत रुपमा बाध्य छैन । कर नाफामा तिर्ने हो । अनि नाफा गर्ने भनेको त एनसेललाई चलाउने टेलियासोनेरा भन्ने कम्पनि हो । टेलियासोनेराले एक्जियाटा भन्ने मलेसियन कम्पनिलाई एनसेलको स्वामित्व बेच्यो र ऊ बाहिरियो ।
यो क्रममा टेलियासोनेराले अर्बौं नाफा कमायो । नेपालकै कम्पनिबिच किनबेच भएको भए त्यसको २५ प्रतिशतवापतको ३३ अर्ब सरकारलाई राजस्व तिर्नुपथ्र्यो ।
तर टेलियासोनेरा र एक्जियाटा दुवै नेपालमा दर्ता भएका कम्पनि होइनन् र हाम्रो नीति पनि विदेशमा दर्ता गरिएका यस्ता कम्पनिबिचको कारोबारलाई बाँध्ने खालको भएन । त्यसैले उसले नेपाललाई लाभ कर तिर्दिनँ भन्ने हिम्मत गर्न सक्यो ।
टेलियासोनेराले एनसेल बेच्दै गरेको जानकारी पत्र सरकारका सम्बन्धित विभागमा पठाएको थियो, तर त्यसमा सरकारी निकायले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । सरकारी अधिकारीहरु भित्रभित्रै मिले वा उनीहरुले ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन्, त्यसैले कमजोरी नीति नियम र हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको हो ।
वास्तवमा व्यवशायीहरुले सरकारका कमजोर नीति र कमजोर कार्यान्वयनका क्षेत्रहरुमा खेल्ने हुन् । चोर जहिले पनि प्रहरीभन्दा एक हात अघि नै हुन्छ । त्यसैले हामीले नीति बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई नै दबाब दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई उपयुक्त नीति बनाउन खबरदारी सुरु गरौं । ताकि अहिले किनेको मलेसियन कम्पनि एक्जियाटाले फेरी अर्कोलाई नाफामा बेच्दा हामीलाई समेत कर तिरोस् । यसबिचमा टेलियासोनेरालाई कर तिराउन सकिन्छ भने त्यो पनि पहल गरौं । तर एनसेल घेर्दैमा नाफा कमाएर हिडिसकेको टेलियासोनेराले कर तिर्दैन ।
विरोध हुनुपर्ने टेलियासोनेरा कम्पनिको हो, एनसेलको होइन । एनसेलको विरोध दुई तरिकाले भइरहेको छ । एकथरीले जानिजानि एनसेललाई तर्साउनको लागि विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोथरीले नजानेर विरोध गरिरहेका छन् । नजानेर विरोध गर्नेहरु एनसेलले ग्राहकलाई लुटेको विश्वास गर्छन् र आफू एनसेल प्रयोग गरिरहेपनि एनसेलको विरोधका जुनसुकै गतिविधिमा सहभागि हुन्छन् ।
मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका बिचमा अहिले नेपाल अफ्ठ्यारो परिस्थितीसँग जुधिरहेको छ । एकातिर इन्धन अभाव, अर्कोतिर औषधी अभावले जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ । किताबको लागि कागजदेखि सियोसम्मको लागि भारतको भर पर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताले हामीलाई नै डस्दैछ । र यो अवस्था आउनुको पछि मुख्य कारण छ, भारतको विस्तारवाद ।
तात्कालिन माओवादीले भन्ने गरेको भारतीय विस्तारवादको सबैभन्दा प्रष्ट नमुना यतिखेर हामी देखिरहेका छौं । लाखौंको संख्यामा आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने, नेपालको संसददेखि सेनासमेतमा प्रतिनिधित्व गराउने, उच्च ओहोदामा पुर्याएर दुई चार दशकमै नेपालको संसदमा कब्जा गरी नेपालका स्रोत साधनमा सहज पहुँचको लागि ऊ आखिरमा नांगो नाचमा उत्रिएको छ ।
भारत छिमेकका सबै देशमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छ । अन्य देशहरुमा आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँको नागरिकता दिलाउने, सत्तामा पुर्याउने र त्यो देशलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरिरहने स्वार्थ भारतको हो । आवश्यकता परे र मौका मिले देश टुक्राएर भारतमा गाभ्न पनि ऊ पछि पर्दैन ।
भारतमा जसको सरकार बनेपनि वा जो प्रधानमन्त्री भएपनि नीति फेरिँदैन । श्रीलंकामा भारतले कसरी भारतीय मुलका तामिललाई श्रीलंकाको नागरिकता दिलायो भन्ने यो उदाहरण भारतीय विस्तारवादलाई बुझ्न काफी छ :
–बेलायती उपनिवेश रहेको सिलोन (श्रीलंका) मा अंग्रेजहरुले उन्नाइसौ तथा बीशौँ शताब्दीतिरै ठूलो संख्यामा दक्षिण भारतीय कामदारहरुलाई, मूख्यतः तमिलहरुलाई, चिया, कफी, रबर तथा नरिवल खेतीका लागि कामदारका रुपमा भित्राए । सन् १९४६ सम्म आइपुग्दा यसरी श्रीलंका पुग्ने दक्षिण भारतीय आप्रवासी कामदार संख्या ७ लाख ८० हजार पुग्यो । जुन श्रीलंकाको तत्कालीन जनसंख्याको ११.७ प्रतिशत थियो ।
–१९४८ मा श्रीलंका ब्रिटीश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (बील) अनुमोदनका लागि संसदमा पठायो । जुन अध्यादेशकोे मुख्य उद्देश्य वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने थियो । उक्त अध्यादेशले श्रीलंकन नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले आफ्नो बुवाको जन्म श्रीलंकामा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । उक्त अध्यादेशको भारतीय तमीलहरुका राजनीतिक दलहरु सिलोन इण्डियन काँग्रेस, अल सिलोन तमील काँग्रेस र सिंहाली बामपन्थी दलहरुलेसमेत चर्को विरोध गरेपनि उक्त अध्यादेश २० अगष्ट १९४८ का दिन संसदबाट पारित भइ १५ नोभेम्वर १९४८ का दिनदेखि कानूनको रुप लियो । उक्त कानून अनुसार केवल ५ हजार भारतीय तमीलहरु श्रीलंकन नागरिकताका लागि योग्य ठहरिएका थिए भने बाँकी अयोग्य साबित भएका थिए ।
–त्यसपछि भारत सरकारको दबाबमा सन् १९४९ मा श्रीलंका सरकारले श्रीलंकामा बसोबास गर्ने भारतीय तमीलहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले इण्डियन एण्ड पाकिस्तानी रेसिडेन्टस (सिटिजिनसिप) पारित गर्यो । जसअनुसार १० वर्षदेखि श्रीलंकामा निरन्तर बस्दै आएका १ लाख भारतीय तमीलहरुले श्रीलंकन नागरिकता पाउन सफल भए ।
नेपालमा भारतीय स्वार्थको आन्दोलन त्यो बेलादेखि सुरु भयो, जबदेखि उपेन्द्र यादवले एक मधेस एक प्रदेशको ऐजेण्डा उठाए । समग्र मधेसलाई एउटा प्रदेश बनाउँदा त्यहाँका स्रोत साधनहरु उपयोग गर्न सजिलो हुने भारतीय योजना हो । सुरु देखि नै यो ऐजेण्डाकोलागि एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने जेपी यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरहरु फेरी त्यही मुद्धामा एक ठाउँ आएका हुन् ।
‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र’ त्यस्तो माग हो, जसले तराईमा रहेका बहुसंख्यक भारतीय मुलका मधेसीलाई सांसद हुने मौका दिन्छ । नेपालमा रहेका भारतीयहरुलाई अंगीकृत नागरिकता दिलाउने प्रशस्तै आधार बनाइसकेको भारतले अब धेरै भन्दा धेरै मधेसी सांसदलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पठाउन चाहन्छ । त्यसो भएमा भारतले आफू अनुकुलका विकास योजनाहरु पार्न सक्छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो नेपाल स्वार्थ भनेको नेपालको पानी, जडीबुटी र खनिज सम्पदाको प्रयोग हो ।
जनसंख्या बढाउनको लागि भारतसँग सजिला तरिकाहरु छन् । नेपालको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल भित्रिएका भारतीलेहरुले नक्कली बाबु, आमा खडा गरेर धेरैले नागरिकता लिएका छन् । छानविन हुने हो भने धेरै फर्जी नागरिकताहरु भेट्न सकिन्छ । सुनसरीबाट मात्रै एक दर्जन त्यस्ता फर्जी नागरिकता दिइएका घटना प्रकाशमा आइसकेका छन् ।
एकातिर तराईको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ भने अर्कोतिर भारतले नेपालको तराई क्षेत्रमा अस्पताल र प्रसुती गृहहरुको लागि अनुदान दिइरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयहरु नेपालको अस्पतालमा आएर प्रसुती गराई नेपाली नागरिकता लिने अवस्था छ ।
भारतमै नभएको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नेपालमा बनाउन पाइयो भने त्यसरी नेपाल आउने भारतीयहरुको संख्या अझै बढ्नेछ । किनकी भारतको बिहारमाभन्दा नेपालमा अधिकारको सवाल उठाउन निकै सजिलो छ । सस्तो सवारी साधन, सस्तो इन्धनलगायतका केही विषयहरुलाई छाडेर हेर्ने हो भने बाँकी कुराहरुमा नेपालमै राम्रो सुविधा छ । सर्वसाधारणलाई सुविधाको लोभ भए जस्तै भारतीय नेतृत्वलाई यहाँका सम्पदाको लोभ छ, जुन सम्पदा चलाउन उसले माग्ने बित्तिकै नेपालले दिँदैन ।
त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल छिराएर उच्च ओहोदामा पुर्याउने योजनामा भारत बन्दोबस्तीका साथ वर्षौंदेखि लागिरहेको छ, जसको पराकाष्ठा यतिखेर हामी भोगिरहेका छौं ।
भारतले फिजीमा आफ्नो संख्या बढाउन जे गरेको थियो, नेपालमा पनि त्यही उपाय लागू गर्दैछ । त्यसैले विश्लेषकहरुले भारतको यो कदमलाई अर्को फिजीकरणसमेत भनेका छन् । भारतले के गरेको थियो फिजीमा हेर्नुहोस् :
–फिजी संविधान विहिनताको अवस्थामा रहेको फाइदा उठाएर भारतले फिजीमा फिजीमा रहेका र जन्मेका जुनसुकै व्यक्ति नागरिक हुने प्रावधान राख्न लगायो । साथै सोहि ऐनमा कुनै बालक निजको बाबुले फिजीको नागरीकता लिनुभन्दा पहिले विदेशमा जन्मेको भएपनि नागरीकता पाउने प्रावधान राखियो ।
–सन् १८८१ मा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरुको जनसंख्या सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुग्यो र यहि नक्कली नागरीकताको आडमा भारतीय नागरीक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसदमा ७१ सिट मध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरुको हातमा गयो ।
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नगरेको, नेपालको आन्दोलनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बरु नेपालतर्फको आन्दोलनका कारण सवारी साधनहरु नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको र मोर्चासँग सहमती हुने बित्तिकै समस्या समाधान हुने दावी गरेको छ । तर मोर्चाले गरेको माग र आन्दोलनमा भारतको भूमिका र गतिविधिलाई जोडेर हेर्दा यो आन्दोलन नेपालीको हो भन्ने पत्याउनै गाह्रो छ ।
भारतले नेपाललाई इन्धन नदिनु, नाकामा लाम लागेका सवारी साधनलाई सुरक्षा दिन्छौं भन्दा भन्दै पनि भारतीय प्रहरीले नेपाल फर्कन नदिनु, धर्ना र आन्दोलन नभएका नाकामा पनि आपूर्ती अवरुद्ध हुनु जस्ता घटनाले नेपालमा भइरहेको आन्दोलन भारतकै इशारामा भइरहेको वा भारतले सघाइरहेको भन्न सकिन्छ । नेपालमा आन्दोलन चलिरहेको समयमा भारतको भूमिका यस्तो छ :
भारत नाकाबन्दी गर्छ ।
भारतीयहरु नेपाली पुलिसलाई ढुंगा हानी घाइते बनाउँछन् ।
भारतीय अधिकारीहरु आन्दोलनकारीलाई भारतीय भूमी प्रयोग गर्न दिन्छन् ।
भारतीय प्रहरीले भारत गएका नेपाली गाडी चालकलाई कुट्छन् ।
भारतीय व्यापारी नेपाली आन्दोलनकारीको लागि मेस चलाउँछन् ।
भारतीय राजदूत र विदेशमन्त्री आन्दोलनकारीको माग पुरा गर्न सरकारलाई दवाब दिन्छन् ।
भारतीय टिभी अनर्गल प्रचार गरेर मान्छे उचाल्छन् ।
भारतको नेपाल हस्तक्षेपलाई लिएर भारतका केही मगज खुस्केका टेलिभिजन च्यानलबाहेकको बौद्धिक जगत र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । नवभारत टाइम्सको सम्पादकीयमा यस्तो लेखिएको छ : “नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक तरह से चेतावनी ही दे डाली कि नेपाल के आंतरिक मामले में भारत दखल न दे। उन्होंने भारत पर नेपाल के तराई इलाके में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया । भारत के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया था ।”
भारतीय विद्वत वर्गले नेपालजस्तो छिमेकीलाई चिढ्याउन नहुने भन्दै मोदी सरकारलाई सचेत गराइरहेपनि भारत आफ्नो पूर्ववत् मिसनमा कत्ति पनि विचलित देखिँदैन । भारतको विगतको गतिविधि हेर्दा भारतका दुई वटा मिसन छन् । पहिलो त नेपालको संसदमा बहुसंख्यक अंगिकृत भारतीयलाई प्रवेश गराइ नेपालको स्रोत साधनमा सहज पहुँच पुर्याउन जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा समग्र तराईलाई मधेस प्रदेश बनाउने उसको रणनीति हो ।
त्यो नभए करोडौं खर्चेर भएपनि द्वन्द चर्काएर छुट्टै प्रान्त बनाउने र पछि भारतमा बिलय गराउने योजना उसको हुनसक्छ । नेपालीको लागि भारतको दुवै योजना घातक छ । त्यसैले मोर्चासँग सहमती गर्दा र उसका मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्दा भोलिदेखि नेपालको संसद्लाई भारतले चलाउने खतरा एकातिर छ भने मागलाई सम्बोधन नगर्दा जनता उचालेर अर्को हिंसा फैलाउने खतरा छ ।
यो काममा तराइ केन्द्रित मधेसी दलहरु लागिपरेका छन् । नेपालका अन्य दलहरुको भूमिका पनि शंकाको घेरामा छ । अनलाइनमा कतै भेटेको भरत दाहालको लेखको यो अंशले त्यसलाई पुष्टि गर्छ :
२०५१ सालमा मनमोहन सरकारको पालामा बनेको धनपति आयोगले जनसंख्या अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिमा बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गर्यो, जसलाई उक्त आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले विरोध गरेका थिए । २०५२ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदलले ०४७ साल कार्तिक महिनालाई आधार वर्ष मानेर नेपालमा बसेका जम्मै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरा सुझाव दियो । तर लागु भएन । २०५४ सालमा जीतेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा गठित नागरिकता वितरण आयोगले ६ दिनभित्र ३४,००० भन्दा बढी गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्यो । यो कदमलाई २०५८ साउन ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएको थियो । यसैगरि २०५४ सालमा बामदेव गौतमको गृहमन्त्रालयले स्थानिय निर्वाचन निर्दे्शिका जारी गरेर स्थानिय चुनावमा उठ्न र भोट हाल्न नागरिकता नचाहिने ब्यवस्था गरेको थियो । यसलाई पनि अदालतको निर्णयले खारेज गरेको थियो । २०५७ जेठमा राज्य ब्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरीकता सम्बन्धि निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो तर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो । प्रतिनिधिसभाले पुनः साउन ११ गते त्यसलाई पारित गर्यो । यो निर्णय स्वीकृतीका लागि राजाकहाँ पठाए पछि उनले सर्वोच्चमा राय मागे । सर्वोच्चले २०५८ बैशाख १२ मा त्यसलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्यो ।
विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिएका यी सबै हतकण्डाहरु पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेपछि दिल्लीले माओवादी युद्धको संवेदलशिल अवस्थालाई चयन गरेको देखिन्छ । बाह्रबुँदे समझदारीपछि २०६३ साल भदौ २१ गते सरकारबाट ०४७ साल चैत्रभित्रको जन्मका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने सबै ‘ब्यक्ति’हरु लाई नागरीकता दिने भनि विधेयक पारित गरी ८ दलका बीचमा सहमति गरियो र त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गरियो । बाबुराम सरकारको गठनका लागि मधेशी मोर्चा र एमाओवादीका बीचमा २०६८ भदौ १० गते भएको ४ बुँदे सम्झौतामा नागरिकतालाई सहज र सरल रुपमा वितरण गर्ने सहमति भयो । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको यहि सहमतिलाई आधार बनाएर ०६८ माघ २० गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयानुसार २४ गते गृहमन्त्री विजय गच्छेदारले ०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुका सन्तानहरु, जो नागरिकता लिनु पूर्व नै जन्मेका थिए, लाई वंशजको आधारमा नागरीकता दिनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आदेश दियो । झापाका तात्कालिन प्रजिअले यस्तो गैर संवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेपछि उनललाई कार्वा्हि स्वरुप त्यहाबाँट सरुवा गरियो । यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो ।
अबको विकल्प भनेको भारतीय नाकाबन्दीसामु नझुकी दह्रो प्रतिरोध गर्ने र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नै हो । अब पनि नेपाल पछि हट्यो भने नेपालको सत्ता, संसद सधैंका लागि भारतलाई लेखेर दिए जस्तै हो । नाकाबन्दी सहजै खुल्छ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । नेपालले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । तराईमा रहेका ठूला उद्योगहरुले तराइबाट लगानी झिक्ने मनस्थिती बनाइरहेका छन् । यसले काठमाडौको तराईसँगको सम्बन्ध झन् घट्नेछ ।
नाकाबन्दी नगरेको देखाउन कहिले मोदी त कहिले भारतीय राजदुत रञ्जित रेले समस्या समाधान होला जस्तो गरेर आश्वस्त पार्छन् भने आइओसीले पनि बेला बेलामा तेल बेच्ने गर्छ । तर अब धेरै मोह जालमा पर्नु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हामीले भारतविरुद्ध उजुरी गर्ने हो भने भारतलाई ठूलै कारवाही हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य बन्न खोजिरहेको भारतले स्थायी सदस्यता पाउने मौका गुमाउनेछ ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँहरुलाई सदुपयोग गर्दै भारतविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । कुनै पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको भारतविरुद्ध हामीले उठाएको आवाजमा अरु देशले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ ।
अन्त्यमा, मोर्चाले राखेका मागहरु भारतको रणनीतिअनुसार नै राखिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन । माग पुरा गर्दा भारतले के पाउँछ र नेपालले के गुमाउँछ, सोच्नु आवश्यक छ । शायद यही भएर होला, यो पटक ठूला दलहरु पनि तुरुन्त सहमती गर्ने मुडमा छैनन् । चार जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा नराखेकै निहुँमा हप्तौं लामो बन्द गर्ने, हस्तक्षेपका लागि भारतलाई निम्त्याउने काम कुनै स्वाभिमानी नेपालीले गर्नै सक्दैन । माओवादी जनयुद्धकालमा पनि यस्तो अत्याचारपूर्ण आन्दोलन भएको थिएन भने त्यो समयमा पनि भारतले नेपालमा सामान पुर्याउन असुरक्षा भो भनेर नाकाबन्दी लगाएको थिएन ।
त्यसैले अब सरकारले र सुरक्षा निकायले विशेष रणनीति बनाउनै पर्छ । मोर्चाका पुरा गर्न सकिने मागहरु पुरा गरेर पुरा गर्न नसकिने मागहरुलाई पुरा गर्न सक्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ । अनि जनतालाई सुरक्षा र शान्तीको वातावरण बनाउन विशेष सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ । दुई चार जना भारतीय एजेन्ट, अनि तिनका दुई चार हजार कार्यकर्ताको कारण समग्र नेपाली जनताले दुःख पाउनु हुँदैन ।
समस्यालाई तत्कालको लागि समाधान गर्ने भनेर दीर्घकालिन असर गर्ने सम्झौता गर्नु हुँदैन । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरुमा संसारको ध्यान आकृष्ट हुन्छ । भारत संसारसामु नांगिनेछ । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरो नागरिकताको व्यवस्थालाई झन् कडा बनाउनुपर्छ । हामीले फिजी र श्रीलंकाको उदाहरणबाटै चेत्नु पर्छ ।
भारतले सत्ता कब्जा गरेको फिजीमा पछि त्यहाँको सेनाले कु गरेर सत्तालाई भारतीयहरुको हातबाट खोसेको थियो । नेपालमा त्यो अवस्था आउन नदिन सेनामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था मागिएको छ ।
(कार्टुनहरु :विभिन्न अनलाइन)
भारतको हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको विरोधमा इटहरीका श्रष्टाहरुले आगो ओकलेका छन् । राष्ट्रियताको पक्षमा स्वाधिन आवाज कार्यक्रम गर्दै सुनसरी श्रष्टा मञ्चको कार्यक्रममार्फत् श्रष्टाहरुले कविता, गीत र गजलमार्फत् भारतीय हस्तक्षेप र विस्तारवादको विरोध गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कवि मनु मञ्जिलले ‘मोदीले अमेरिकामा तीन वटा बिग ब्लो खाए’ भन्दै मोदीलाई कालो झण्डा देखाइएको, संयुक्त राष्ट्रसंघले संविधानको स्वागत गरेको र भारतले सुरक्षा परिषद्मा ठाउँ नपाएको प्रसंग उल्लेख गरे ।
‘नजिकका स साना सुन्दर मित्रहरुलाई सधैं हेप्ने मानिसहरुले अग्लो कुर्सी पाउनु हुँदैन, गड ब्लेस हिम ।’
भन्दै उनले ‘दुई देश संवाद’ शीर्षकको कविता यसरी सुनाए :
तिमी स स्याना कुराले बनेको साह्रै ठूलो देश
हामी ठूल्ठूला कुराले बनेको यौटा सानो देश
तिमीलाई आफ्नै मरुभूमीले चुसिरहेछ ।
तिमीलाई आफ्नै नीचताले पिटिरहेछ ।
इतिहासभरी दास भएर, इतिहासभरी लास भएर बाँचेका तिमी
साह्रै सस्याना कुराले बनेको साह्रै ठूलो देश
संसारका अनेक उच्च हिमाल
हिमालहरुका हिमाल सगरमाथा
मानिसहरुका मानिस गौतमबुद्ध
रानीहरुकी रानी जानकी
कैल्यै नहारेको इतिहास, कैल्यै नझुकेको आत्मबोध
यिनै ठूल्ठूला कुराले बनेको हाम्रो यौटा सानो देश
तिमी आफ्नै समुद्रमा रोएर बस
आफ्नै मरुभूमीमा चिच्याएर बस
आफ्नै माग्ने छोराछोरीलाई हारेको इतिहास घोकाएर बस
तिम्रा आफ्नै नर्कहरु छन्, त्यही अब आहाल बस
तिम्रा आफ्नै लुतोहरु छन् घाममा कन्याएर बस
हामीले तिमीलाई स्वतन्त्रता दिलायौं
रगत दिएर सुरक्षा दिलायौं
नदी दिएर पानी पिलायौं
साथी सम्झेर छाती मिलायौं
तिम्रो नीचता कैल्यै मरेन
तिम्रो घृणा कैल्यै घटेन
तिम्रो ठूलो शरीरभित्र हृदय कहिँ अटेन
सधैं अरुलाई डस्नुपर्ने
अर्काको जुत्तामा बस्नुपर्ने
मध्यरात वा मध्य दिन
अर्काको घर पस्नुपर्ने
जगतको आँखाबाट सधैं सधैं खस्नुपर्ने
घृणाले विशाल नीचतै नीचताले विशाल
झुटै झुटले विशाल
लुटको धनले विशाल
मैले सधैं माया गरेको परदेशी,
सगरमाथा तिमीलाई हेर्नु चाहँदैन
बुद्ध तिमीलाई देख्नु चाहँदैन ।
आफ्नै माग्ने छोराछोरीलाई हारेको इतिहास पढाएर बस
तिम्रा आफ्नै नर्कहरु छन्, त्यही गएर आहाल बस
आन्दोलनको लागि भारतीय सहयोग लिएका मधेसी दलहरुविरुद्ध साहित्यकार तथा पत्रकार कृष्णविनोद लम्सालले यसो भने :
... तर एकाएक बेइमान गरेर हामीलाई पिछलग्गू र उल्लु बनाएर तिमी सत्ता स्वार्थको जंगलमा फँस्यौ
बर्बाद गाउँलाई बिर्सेर सहर मै बस्यौ
अवसर प्राप्तीको जोड घटाउ गर्दै आफ्ना कित्ता निर्माण गर्न लाग्यौ
अहिले फेरी संघीयताको सीमांकन मिलाउन जिन्दावाद मुर्दावाद बोलिरहेछौ
सरकारी कार्यालय पोलिरहेछौ, निषेधाज्ञा तोडिरहेछौ
यो उत्कर्षलाई तिमीले राष्ट्रियताको मुठ्ठीमा कस्न सकेनौ
र विखण्डनकारी विस्तारवादको मतियार बनेर
नेपालीको चुल्हो बल्न नदिने दशगजा नीति लियौ ...
भारतीय विस्तारवाद प्रवृत्ती र नेपालका प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोगमा उसले देखाउने गरेको चासोलाई सरस्वती न्यौपानेले यसरी खुलासा गरीन् :
विस्तारवादको संगीन हाम्रो छातीमा गाडिदैछ ।
अस्तीत्व हाम्रो हामीसामु हामीबाटै हाम्रै कारण खोसिँदैछ ।
सुस्ता, कालापनी मानेभञ्ज्याङको ताजा तातो रगत बग्दैछ ।
कोशी खाई काली सकेर अब त सेती पनि ताक्दैछ ।
‘हामीले हाम्रो संविधान बनाइरहँदा उसले गर्ने कि हामीले गर्ने ?’ भन्दै मीना श्रेष्ठ भारतमाथि नै नाकाबन्दी गर्न आह्वान गर्छिन् :
आऊ अब नाकाबन्दी गरौं
सुनदेखि नुनसम्म हलोदेखि हाइड्रोसम्म सबै कुरा भर प¥यौं
जे गरे नि जसो गरे नि परनिर्भर भयौं
हेप्न सम्म हेप्यो अब
भो अब सहिन्न
हेपाइ सुन्दा रगतै उम्लिन्छ
शरीरका नशाहरु भक्भक तातिन खोज्छ
घरघरबाट चुल्हो चुल्हो बाट भान्सा कोठाबाट, टिभीको च्यानलबाट
भो यिनलाई नाकाबन्दी गरौं
भो यिनलाई गृहप्रवेश निषेध गरौं ।
बारम्बारको बन्द र आन्दोलनले दिक्क लगाएको नेपालीको भावलाई अन्जु गौतमले गीतमार्फत् यसरी पोखिन् :
देश रहे नि लै ले हामी रहौंला
मातृभूमीको हस्तक्षेप कहाँ सहौंला
भूकम्प र बाढी पैरो, पीडा देशै भारी
बाटो स्कुल कलकारखाना बन्द घरी घरी
पीर प¥यो नि लै लै गरीब दुःखीलाई
आन्दोलनले बिगा¥यो है हामी सबैलाई
आन्दोलन र मागहरुबारे थाहै नभएका व्यक्ति र शान्तीपूर्णको नाममा हतियार बोकेर आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीविरुद्ध विवश पोख्रेल यसरी खनिए :
विचराहरुलाई थाहा छैन संघीयताको अर्थ
अनाहक जुलुसमा डढेर काला भएका छन्
भन्छन्, यो शान्तीपूर्ण आन्दोलन हो
अचम्म जस्को शान्ती अस्त्र भने
लाठि, मुंग्रो र भाला भएका छन्
टिका आत्रेयले नेपालका नदीहरुले भारतीय भूमी सिँचाई गर्नु पनि गल्ती भएको बताइन् :
थोपा थोपा बटुलिएर हरियो नबनाइदेऊ उसको छाती
जसले तिम्रो धड्कन थुनिदिएको छ
गल्ती भयो कर्णाली ओह्रालो बगेर
भूल भयो कोशी दक्षिण झरेर
यता कवि प्रल्हाद पहरेदारले भारतको चरीत्र र भारतीय भूमी प्रयोग गरी आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारी चरीत्रमाथि छन्दमा यसरी तिखो आलोचना गरे :
जुको बनेर चुस्छ ऊ
बनेर सर्प डस्छ ऊ
सियो बनेर पस्छ ऊ
लिसो बनेर बस्छ ऊ
ऊ दाउ हेर्छ आफ्नो नै विचार लाद्न पाइने
महत्वपूर्ण ठाउँ फेरी मोदीलाई चाहिने
प्रयोग गर्छ माग राख्न भारतीय भूमी जो
चुल्हो निभाई राष्ट्रको निकाण्ड हाँस्न सक्छ जो
(आफ्नो लागि प्रयोग गर्दा स्रोत अनिवार्य खुलाउनुहोस् ।)
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुजरातको मुख्य मन्त्री भएर त्यहाँ गरेको विकासको सबैले प्रसंसा गरेका छन् । राम्रो काम गरेकैले उनी पटक पटक गुजरातको मुख्य मन्त्री भए र अहिले भारतको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । वाककलामा निपुण मोदी अत्यन्त चतुर र मेहेनती छन् ।
तर मोदीको शासनको आधार गुजरातमा आजभोलि दंगा भड्कीएको छ । केही दिनअघि मात्र अहमदाबादको जीएसमडीसी मैदानमा झण्डै ३ लाख मानिस भेला भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् र त्यसको नेतृत्व गरेका थिए २२ वर्षका हार्दिक पटेलले । उनले त्यहाँ एक घण्टा भाषण गरे ।
किन तात्यो गुजरात ?
विकासको दृष्टिले गुजरातमा पटेलहरु सम्पन्न मानिन्छन् । हिरा व्यापारीहरु अनि अहिलेका मुख्यमंत्री पनि पटेल नै छन् । हुनेखाने भनिएकैले होला, उनीहरुलाई आरक्षण थिएन । २० प्रतिशत पटेल भएको गुजरातमा अहिले पटेलहरु आरक्षण पाउन या आरक्षण नीति नै हटाउनका लागि संघर्षरत् छन् । सो क्रममा कयौं पटक र्याली निकालिएको छ, आमसभा गरिएका छन् । आन्दोलन चर्किँदै आएर तनावको स्थिती सृजना भएपछि अहिले स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरिएको छ र कफ्र्यु लगाइएको छ । प्रहरीसँगको झडपमा आधा दर्जन बढीको मृत्यु भइसकेपछि विश्वभरका मिडियाको ध्यान अहिले हार्दिक र उनले थालेको अभियानमा छ । यत्रो ठूलो आन्दोलनको नेतृत्व २२ वर्षका ठिटोले गरिरहेको खबर प्रकाशमा आएपछि त झन् हार्दिकको पछाडी कसको सहयोग छ भनेर अनेकन हल्ला चल्न थालेका छन् ।
सबै पटेल धनी छैनन्
भारतमात्र होइन, बेलायतमा पनि करीब अढाई लाख पटेल छन् । अमेरिकामा दुई लाख पटेलहरु बस्छन् । तर हार्दिक भन्छन्, पाँच देखि दस प्रतिशत पटेलमात्र धनी छन् र ग्रामीण इलाकाका पटेल परिवार निकै गरिब छन् ।
जम्मा पटेलमध्ये १० प्रतिशत धनी पटेलको आधारमा ९० प्रतिशत पटेलहरुलाई सुविधाबाट वञ्चित गराइएको उनीहरुको गुनासो छ । जागिर र शिक्षामा आरक्षण माग्दै भएको आन्दोलन हार्दिककै अगुवाइमा पछिल्ला ४० दिनमा चर्किएको छ र यो त्यहाँको राज्य सरकारको प्रमुख टाउको दुःखाइ बनेको छ । पटेलहरुले गरेको माग हो, ‘आरक्षण पटेलहरुलाई पनि देऊ, नभए कसैलाई नदेऊ’ पटेलको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी पनि दबाबमा आएको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
कम उमेरमै चर्चाको शिखरमा
हार्दिक पटेललाई दुई महिना अघिसम्म निकै कम मानिसले मात्र चिन्थे । हार्दिक पटेल गुजरातका भाजपा कार्यकर्ता भारतभाई पटेलका छोरा हुन् । उनको पानी तान्ने पम्प बेच्ने सानोतिनो व्यापार छ ।
हार्दिक पटेलले तीन वर्षअघि अहमदाबादको सहजानंद कलेजबाट स्नातक गरेका थिए । पटेलले आफ्नो सार्वजनिक जीवन २०११ मा महिला तथा गरिब किसानविरुद्ध हुने उत्पीडनसँग लड्न एक सामाजिक संगठन खोलेर सुरु गरेका थिए ।
हार्दिककाअनुसार उनकी बहिनीले गत वर्ष साह्रै राम्रो नम्बर ल्याएर उच्च शिक्षाको अध्ययन पुरा गरिन् । तर उनलाई छात्रवृत्ती मिलेन, बरु अर्को जातिको औसत नम्बर ल्याउन बच्चाले छात्रवृत्ती पायो । क्षमता हुँदा हुँदै र आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पनि छात्रवृत्ती नपाएको घटना उनमा गढ्यो । उनले साथीहरुसँग कुरा गरे । साथीहरुको सहयोगले उनले आन्दोलन थाले । हार्दिकले थालेको आन्दोलनमा पटेल समुदायका रिटायर्ड कर्मचारीहरुको पनि भुमिका छ । सरकारका विभिन्न निकायमा राम्रै अनुभव सम्हालेका उनीहरुको रणनीतिले राम्रो काम गरिरहेको छ ।
गुजरातमा पटेलहरुको आन्दोलनले मुख्यमन्त्री फेर्ने सम्मको क्षमता राख्छ । केही अघि पनि पटेल समुदायकै आन्दोलनका कारण एक जना मुख्य मन्त्री फेरीएका थिए ।
यो पटक पटेल समुदाय २२ वर्षे ठिटोको नेतृत्वमा आन्दोलनमा छ । तर हार्दिक भाषणकलामा पूर्व मुख्यमन्त्री मोदीभन्दा कम छैनन् । सरदार पटेलबाट प्रभावित हार्दिक पटेल भाषणका क्रममा ‘जय सरदार’ को नारा दिन्छन् । उनको र्यालीमा पनि मानिसहरु सरदार पटेलको मास्क लगाएर बसेका देखिन्छन् ।
उनले ६ जुलाइमा पहिलो र्यालीलाई सम्बोधन गर्दा १२ हजार मानिस थिए । उनको दोस्रो र्यालीमा पचास हजार मानिस आए भने तेस्रो कार्यक्रममा साढे चार लाख मानिस भेला भए ।
गुजरातका पटेल र नेपालका क्षेत्री बाहुन
भारतको गुजरातमा पटेलहरुको जुन स्थिती र मनोदशा छ, नेपालका बाहुन क्षेत्रीको ठ्याक्कै त्यही अवस्था छ । अवस्था एउटै भएका कारण आज गुजरातमा बलेको आगो भोलि नेपालमा नसल्केला भन्न सकिन्न । किनकी एउटा समुदायलाई सुविधा दिँदा अर्को समुदायले सुविधा विहिन भएको वा हेपिएको अनुभव गर्नु नै द्वन्दको सुरुवाती चरण हो ।
नेपालमा बाहुन क्षेत्री सम्पन्न र अवसर पाएका वर्ग मानिन्छन् । तर यथार्थमा त्यस्तो छैन । सबै बाहुन क्षेत्री शासन गर्ने ठाउँमा छैनन् र सबै बाहुन क्षेत्री धनी पनि छैनन् । आरक्षण र सहुलियत पाएका वर्ग भित्र पनि पूर्ण गरिबी र पछौटेपन छैन । दलित समुदायमा अत्यन्त धनी परिवार पनि छन् । तर नेपालमा पनि अहिलेसम्म गरीबीका आधारमा होइन, जातका आधारमा छात्रवृत्ती र आरक्षण दिने व्यवस्था छ ।
जातिय आरक्षणले हट्दैन वर्गीय विभेद
नेपालमा आरक्षण केही समयको लागि ठिक थियो । तर आरक्षण आफैमा दीर्घकालिन उपाय होइन ।
त्यसमाथि जातिय आरक्षणले भोलि गुजरातमा जस्तै समस्या निम्त्याउन सक्दैन भन्न सकिन्न ।
त्यसैले अब भने आरक्षणको साटो प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने गरी शिक्षा प्रणाली फेर्ने र गरिब, पछि परेका परिवारलाई शिक्षामा विशेष तालिम, शिक्षाका लागि छात्रवृत्ती दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यून आर्थिक आय भएका परीवारका सदस्यलाई पढाई र तालिमजस्ता अवसर बढाइ प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने नीति ल्याउनु आवश्यक छ । गरिब दलित, गरिब जनजाती अनि गरिब बाहुन क्षेत्रीले छात्रवृत्ती पाउन् । छात्रवृत्तीले उनीहरुलाई प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाओस् र उनीहरु हरेक क्षेत्रमा विना आरक्षण अघि बढ्न सकुन् ।
(साभार गर्दा स्रोत अनिवार्य उल्लेख गर्नुहोला ।)
विगत वर्षमा कर कम उठ्यो । विदेशीबाट पनि मागेजति सहयोग पाइएन ।
भैचालोले गर्दा देशकै कारोबार खस्क्यो ।
गरीबहरुको संख्या थोरै बढेको छ तर धन्न, २५ प्रतिशत नाघेको छैन ।
मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटेको छ ।
८ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ८८ लाखको बजेट आयो ।
बाटो बनाउनलाईभन्दा मन्त्रीको क्वार्टर चलाउनलाई अलि बढी पैसा विनियोजन गरिएको छ ।
चुरोट, मदिराको भाउ बढ्दैछ ।
धान उत्पादन होस् वा नहोस्, सिमेन्ट उद्योगलाई जथाभावि खन्न अनुमती दिइएको छ ।
तराईका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु ।
व्यापार घाटा बढिरहेको छ । त्यसैले चुरोट र मदिराबाहेकका उद्योग खोल्दा सहुलियत, निर्यात गर्दा सामान्य सहुलियत दिने भएको छु ।
विकास निर्माणका कुरा त्यस्तै हुन्, कसैले खर्च गर्नै नसक्ने भएपछि किन धेर छुट्याउनु ?
पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च तेब्बर बढी छ ।
मध्य पहाडी शहरहरुको विकासका लागि केही बजेट छुट्याएको छु ।
गाविस जति गाभियो, त्यती फाइदा । दुई वटा गाविस गाभिए ५० लाख दिने, तीन वटा गाभिए एक करोड दिने ।
देशको आम्दानी र खर्चबारे चिन्ता नलिनु, गाउँटोलको विकास गर्नु पर्यो भने सांसदलाई डेढ करोड दिएको छु।
काठमाडौमा चार सय चर्पी बनाइनेछ । ठाउँ ठाउँमा खाली जग्गाको व्यवस्था गर्न निजी जग्गा पनि किनिनेछ ।
काठमाडौमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र ८ करोड छुट्याएको छु। प्रादेशिक सडकहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन ११ करोड छुट्याएको छु ।
दुई वर्षभित्र काठमाडौ मेलम्चीको पानीले सिनित्तै पारिनेछ । त्यो अघि ट्यांकरकै पानीले मुख धुनुपर्नेछ ।
२५ वर्षमा नेपालीको औसत आयु १६ वर्ष बढ्यो । नेपालीहरु बढी बाँच्न थाले ।
न्याय नपाए निराश हुनुस्, नारा नपाए बजेट भाषण पल्टाउनुस् ।
वृद्धभत्ता महिनाको एक हजार रुपैया पुर्याइदिएको छु ।
कृषिमा अनुदानै अनुदान ।
जलविद्युत् निर्माणमा तीव्रता, सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेछु ।
वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहित गर्नेछु । चुरे बचाउनेछु ।
मुद्रा स्फिती सोचेभन्दा बढी हुने भो । त्यो भनेको मुद्राको भाउ घट्ने भो । त्यो भनेको आज एक सय रुपैयामा आउने सामान एक वर्षपछि किन्न खोज्दा १०७.४ रुपैया पर्ने भो ।
प्रजातन्त्रयता धेरै पटक अर्थमन्त्री बनेँ, तर ‘देशको’ आर्थिक वृद्धि त्यती राम्रो छैन । के गर्नु, यस्तै छ । यो देश बनाउँदा पनि नबन्ने देश हो । टालटुल मात्र हुन्छ, देश बन्दैन ।
-Yugpath, photo: setopati
आज राखेपको सदस्य सचीवमा चार वर्षे कार्यकालको लागि नियुक्त भएका केशव विष्टसँग ठ्याक्कै एक वर्षअघि कलेज टाइम्स मासिक पत्रिकाको लागि मैले कुराकानी गरेको थिएँ । त्यतीबेलाको वहाँको भिजन र नेतृत्व मन परेरै त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउनैपर्ने निर्णयमा पुगेको थिएँ । खेलकुद विकासको लागि वहाँका भिजनहरु के कस्ता छन् त ? एक वर्षअघि वहाँसँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै :
समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा सञ्चारकर्मीहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु चाहिँ खासमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हो । प्रेस भनेको निर्जिव सञ्चारमाध्यम होइन, त्यसलाई गती दिने सञ्चारकर्मी हो ।
हिजो एउटा खबर आयो । पत्रकारको तलब न्युनतम रु. २० हजार पुर्याउन पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले माग गर्यो ।
पढ्ने मान्छेलाई खबरले भन्दा अंकले तान्यो । २ को पछाडी ४ वटा शुन्यसहितको संख्याले मुख्यतः दुई पक्षलाई तान्यो । पत्रकारलाई अनि पत्रकारलाई पाल्छु भन्ने मिडिया मालिकलाई ।
महिनाभर कडा परिश्रम गरेर पनि कोठाभाडा तिर्न धौ धौ हुने पत्रकारहरु महिनाकै २० हजार पाइन्छ कि भन्ने नयाँ आशाले आकर्षित भए । अनि नाम र काम दियो भने दाम दिनै पर्दैन भन्ने सोच्ने मिडिया मालिकहरु चाहिँ २० हजारको अंकबाट सशंकित भए ।
यस्ता अंकहरु यसअघि पनि बारम्बार सुनिन्थ्यो । पारिश्रमिक निर्धारण समिति बन्थे । के के न गरुँला गरेर समितिका सदस्यहरु जिल्ला डुल्थे । सबैका कुरा सुन्थे, टिप्थे । उनीहरुले टिपेका कुरालाई हिसाबकिताब गरेर अन्तीममा यौटा अंक निकाल्थे, .... हजार । अनि अर्को नयाँ आश देखाएर पत्रकार महासंघको एउटा कार्यकाल सकिन्थ्यो ।
अंक तोकेर र माग गरेर हुनेवाला केही छैन, भएको पनि छैन । गर्नुपर्ने कुरा अरु नै छन् । भीरको ढुंगा फुटाउनुपर्ने हो, तर हामी छेकबार लगाइरहेका छौं । फेरी पनि भन्छु, जतिसुकै अंक तोकिउन्, गर्नुपर्ने खास काम नगरेसम्म हुनेवाला केही छैन । लम्बेतान माग राख्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नैपर्दैन । पत्रकार महासंघको एउटा कार्यकालले आफ्नो एक तिहाई समय खर्चेर दुई वटा काम गरोस्, न्युनतम पारिश्रमिकलगायतका मिडियाका आधाजसो समस्या चट् हुन्छन् ।
बैंक खोल्दा निश्चित चुक्ता पुँजी चाहिन्छ । यहाँसम्म की सय, पचास उठाउने सहकारीहरुको लागि पनि कडीकडाउ नियम छन् । शैक्षिक संस्था, अस्पतालहरुको लागि पूर्वाधारको मापदण्ड छ । तर राज्यको महत्वपूर्ण अंग मानिएको सञ्चारमाध्यमको लागि खै पूर्वाधारको मापदण्ड ?
सुन्दा प्रेस विरोधी सुनिएला, तर तितो भएपनि सत्य कुरा गर्नुपर्ने समय हो यो । किनकी अब लम्बेतान बहस होइन, नतिजा दिनसक्ने समाधान चाहिएको छ । मेरा शब्दहरु कडा भए नरम शब्द खोजिउन्, तर भावार्थ त्यही हो । प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भनेको मिडिया हाउसलाई पुग्ने अवरोध मात्र होइन, समयमा पारिश्रमिक नपाउँदा सञ्चारकर्मीहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु चाहिँ खासमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हो । प्रेस भनेको निर्जिव सञ्चारमाध्यम होइन, त्यसलाई गती दिने सञ्चारकर्मी हो ।
एसएलसी फेल प्रकाशक, मरितरी पास सम्पादक अनि सरकारी कार्यालयअगाडी बसेर दलाली गर्नेहरुले व्यवस्थापन गरेको सञ्चारमाध्यमकै कारण व्यवस्थित तरिकाले चलाइएका मिडिया हाउसलाई असर परेको छ । झोलाभित्र कार्यालय बोकेर हिड्ने पत्रिकाहरुले पत्रकारलाई पाँच हजार रुपैयाँ पनि तलब दिन सक्लान् ? त्यसैले अस्तव्यस्त सञ्चालन गरिएका नेपालका आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका एफएम तथा पत्रिकाहरु मुख्य समस्या हुन् । त्यसको लागि सुविधासम्पन्न कार्यालय र धरौटीको प्रावधान राख्नुपर्छ ।
मापदण्ड बनाउनुपर्यो । मापदण्ड यस्तो होस्, चलिरहेका मिडिया मर्ज हुन् । मर्ज हुन नसक्ने र मापदण्ड पुरा गरेर कार्यरत् पत्रकारलाई तोकेअनुसारको सुविधा दिन नसक्ने मिडियाहरु चलाएर पो के काम ? तर एउटा सामान्य साप्ताहिकले पनि कम्तिमा पाँच जना कर्मचारी पाल्ने हैसियत भएमा मात्र पत्रिका चलाउन् ।
नयाँ मिडिया चलाउँछु भन्नेसँग धरौटी मागियोस् । पत्रकारले तलब पाएनन् भने त्यही धरौटीबाट काटेर दिइयोस् । न्युनतम पूर्वाधार, कार्यवातावरण बनाउनै पर्ने नियम ल्याइयोस् ।
यसो गर्दा मुख्यतः दुई वटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो त विज्ञापनको सिमित बजारको लाभ व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गरिएका मिडियाले पाउँछन् । दोस्रो, प्रकाशकीय र सम्पादकीय त्रुटी भएका र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने मिडियाहरु कम हुँदा आम स्रोता, दर्शक, पाठकहरुको पत्रकारिताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ ।
विज्ञापनको स्रोत सिमित छ, तर व्यवस्थित तरिकाले चलाइएका मिडिया र अस्तव्यस्त दुवैथरी मिडियाहरुको भीड छ । दशैं, तिहारमा मात्र छापिने पत्रिकाहरु पनि छन् । यि सबै मिडियाको लागि सिमित स्रोत बाँडिदा व्यवस्थित मिडियाले पाउने विज्ञापन कटौती भइरहेको छ । स्रोत घटेपछि पत्रकारलाई राम्रो तलब दिन सकिने कुरै भएन ।
दोस्रो काम, कार्यरत् पत्रकारहरुको योग्यताको पुनरावलोकन । शिक्षक हुन पहिला लाइसेन्स लिनुपर्छ, त्यसपछि जागिर खान आयोगको अर्को परिक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । तर यति महत्वपूर्ण चौथो अंग पत्रकारहरुको लागि खै परिक्षा ?
कतिपय पत्रकारहरु आचारसंहिता र सुचनाको हकबारे समेत जानकारी राख्दैनन् । उनीहरुले अरुलाई सुसुचित गराउलान् ? त्यसैले सबैभन्दा सजिलो पेशा र अरु केही काम नभएपछिको पेशाको रुपमा पत्रकारिताले आफ्नो नयाँ छवि नबनाओस् । दक्ष जनशक्ति राख्नैपर्ने नियम ल्याइयोस् ।
मिडिया उद्योग बाँकी उद्योगको तुलनामा सबैभन्दा भद्रगोल उद्योग हो । गार्मेन्टमा काम गर्नेले दिनको तीन सय रुपैया पाउँछ । मिडियामा काम गर्नेलाई त्यतीको पनि ग्यारेन्टी छैन । कामदारलाई पैसा दिनु नपरेपछि मिडिया चलिरहन्छ । अन्य उद्योगका फर्ममा श्रम सम्बन्ध बिग्रने बित्तिकै फर्म बन्द हुन्छ । तर कामदारलाई पैसा दिन नसकेर बन्द भएको मिडिया विरलै भेटिन्छ । मजदुर संगठनजत्तिको दह्रो पनि भएनन् हाम्रा छाता संगठनहरु ।
पत्रकारिताका लगामहरु बेकाम छन् । यहाँ कसैले कसैलाई टेर्दैन, नटेर्नेलाई कारवाही हुँदैन । समस्या एउटा भएको भए, नियमले बाँध्न सकिन्थ्यो । तर यहाँ त समस्याका चाङ छन् । जबसम्म मिडिया सबैभन्दा सजिलो व्यवशायका रुपमा रहीरहन्छ, तबसम्म न त यहाँ मिडियाहाउसको विकास हुन्छ, न त पत्रकारहरुको ।
हुन त अबको केही वर्षमा मिडियामा थोरै तलब दिने समस्या आफै समाधान हुन्छ । किनकी अब नयाँ पत्रकार आउने क्रम धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ । पुरानाले पनि पेशा परिवर्तन गर्ने वा मिडियालाई पार्ट टाइम व्यवशाय बनाइरहेका छन् ।
नेपालजस्तो सानो देशमा अहिल्यै अचाक्ली मिडिया छन् र बढिरहेका छन् । हुन त प्रतिष्पर्धीको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसले अरु ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ । तर सञ्चार उद्योगको सवालमा त्यसको ठिक उल्टो प्रभाव पर्छ ।त्यसैले मिडिया मर्ज गरौं, भएकालाई स्तरीकरण गरौं, पत्रकारलाई दक्ष र व्यवशायीक बनाऔं ।
अनि मात्र प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले भनेझैँ आउँदो १० वर्षमा नेपालका पत्रकारहरु कारमा चढेर हिड्ने हैसियतमा पुग्नेछन् । त्यसैले न्युनतम पारिश्रमिकको हौवा त्यागेर मिडियालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पहल गरौं ।
photo : newsfirst.lk